စိတျရောဂါဆရာဝနျတဈဦးကသုံးသပျထားတဲ့ Amber Heard ရဲ့ စိတျအခွအေနေ။ – SoShwe
Home/Entertainment/စိတျရောဂါဆရာဝနျတဈဦးကသုံးသပျထားတဲ့ Amber Heard ရဲ့ စိတျအခွအေနေ။
So Shwe2weeks ago	Entertainment Leaveacomment
Johnny Depp နဲ့ဇနီးဟောငျး Amber Heard တို့ရဲ့ ကမ်ဘာကြျောအသရဖေကျြမှုတရားခှငျကွီး ပွီးဆုံးသှားပမေယျ့ ဂယကျတှကေတော့ အခုခြိနျထိ ဆကျလကျရိုကျခတျနဆေဲပါ။ အမှုရှုံးသှားတဲ့ Amber ဟာ Depp ကိုနဈနာကွေးအနနေဲ့ ဒျေါလာ ၈ သနျးပေးဆောငျရမှာဖွဈပမေယျ့ ပေးနိုငျတဲ့အခွအေနမေရှိတဲ့အပွငျ တရားခှငျမှာတငျ လိမျလညျနတောတောငျမဟုတျဘဲ နောကျပိုငျးအငျတာဗြူးတှမှောလညျး ဆကျလိမျနတေယျလို့ စိတျရောဂါကုဆရာဝနျတဈယောကျက ထုတျပွောလာပါတယျ။
ကြှမျးကငျြစိတျရောဂါကုဆရာဝနျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Angelica ဟာ သူမရဲ့ Rise beyond Abuse ဆိုတဲ့ You Tube Channel ကနတေဆငျ့ အိမျတှငျးအကွမျးဖကျမှုခံရတဲ့ အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အကူအညီတှေ၊ ကုသရေးတှလေုပျပေးနတေဲ့ ဆရာဝနျတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ Amber တို့တရားခှငျစကတညျးက သူမဟာ တရားခှငျ Video တှကေိုလိုကျကွညျ့ပွီး မှတျခကျြတှပေေးနသေူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။
“ကြှနျမမွငျမိတာကတော့ အရမျးအတ်တကွီးလှနျးတဲ့လူတဈယောကျရဲ့ စရိုကျလက်ခဏာတှပေါ။ ဒီနရောမှာသူမက သတေဲ့အထိ တရားရငျဆိုငျသှားမယျလို ပွောထားတယျ။ ဟုတျတာပေါ့ . . . အတ်တကွီးတဲ့လူတှေ လုပျတတျတာက သတေဲ့အထိသူတို့မမှားဘူးဆိုပွီး လိမျတာလေ။ အတ်တသမားတှရေဲ့ လကျစှဲဆောငျပုဒျက ဘာလဲသိလား? သတေဲ့အထိလိမျတဲ့! သူကတော့ ဟိုးအသကျငယျငယျလေးထဲက လိမျခဲ့တာဖွဈမယျ။ သူကိုယျတိုငျရဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအနိုငျကငျြ့မှုတှကွေောငျ့ ဒီလိုပုံစံဖွဈသှားတာ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ထငျမွငျခကျြကို ဝမြှေခဲ့ပါတယျ။
လိမျလညျခွငျးဟာ Amber အတှကျတော့ ပုံမှနျလိုဖွဈနပွေီလို့လညျး ပွောခဲ့ပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ သူမအနနေဲ့ လိမျနတောကို ကိုယျတိုငျသတိမထားမိနိုငျတော့တာပဲဖွဈဖွဈ၊ ဘယျလိုမှကို မခံစားရတော့တာတောငျ ဖွဈနိုငျပါတယျတဲ့။ “လိမျလညျခွငျးက သူ့အတှကျတော့ ထုံးစံဖွဈနပေါပွီ။ ဒီတရားခှငျကလညျး သူမလိမျလညျမှုရဲ့ အစိတျအပိုငျးအကွီးကွီးတဈခုပါ။ တကယျအိမျတှငျးအကွမျးဖကျမှုတှကေို ကြျောဖွတျခဲ့ရတဲ့ ကြှနျမတို့တျောတျောမြားမြား အဲ့ဒီအခကျြကိုလကျခံကွပါတယျ။’ ဆိုပွီး သုံးသပျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
စိတ်ရောဂါဆရာဝန်တစ်ဦးကသုံးသပ်ထားတဲ့ Amber Heard ရဲ့ စိတ်အခြေအနေ။
Johnny Depp နဲ့ဇနီးဟောင်း Amber Heard တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကျော်အသရေဖျက်မှုတရားခွင်ကြီး ပြီးဆုံးသွားပေမယ့် ဂယက်တွေကတော့ အခုချိန်ထိ ဆက်လက်ရိုက်ခတ်နေဆဲပါ။ အမှုရှုံးသွားတဲ့ Amber ဟာ Depp ကိုနစ်နာကြေးအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၈ သန်းပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပေမယ့် ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတဲ့အပြင် တရားခွင်မှာတင် လိမ်လည်နေတာတောင်မဟုတ်ဘဲ နောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတွေမှာလည်း ဆက်လိမ်နေတယ်လို့ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ယောက်က ထုတ်ပြောလာပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Angelica ဟာ သူမရဲ့ Rise beyond Abuse ဆိုတဲ့ You Tube Channel ကနေတဆင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အကူအညီတွေ၊ ကုသရေးတွေလုပ်ပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ Amber တို့တရားခွင်စကတည်းက သူမဟာ တရားခွင် Video တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီး မှတ်ချက်တွေပေးနေသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်မမြင်မိတာကတော့ အရမ်းအတ္တကြီးလွန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေပါ။ ဒီနေရာမှာသူမက သေတဲ့အထိ တရားရင်ဆိုင်သွားမယ်လို ပြောထားတယ်။ ဟုတ်တာပေါ့ . . . အတ္တကြီးတဲ့လူတွေ လုပ်တတ်တာက သေတဲ့အထိသူတို့မမှားဘူးဆိုပြီး လိမ်တာလေ။ အတ္တသမားတွေရဲ့ လက်စွဲဆောင်ပုဒ်က ဘာလဲသိလား? သေတဲ့အထိလိမ်တဲ့! သူကတော့ ဟိုးအသက်ငယ်ငယ်လေးထဲက လိမ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုတွေကြောင့် ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတာ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
လိမ်လည်ခြင်းဟာ Amber အတွက်တော့ ပုံမှန်လိုဖြစ်နေပြီလို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူမအနေနဲ့ လိမ်နေတာကို ကိုယ်တိုင်သတိမထားမိနိုင်တော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုမှကို မခံစားရတော့တာတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ “လိမ်လည်ခြင်းက သူ့အတွက်တော့ ထုံးစံဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတရားခွင်ကလည်း သူမလိမ်လည်မှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအကြီးကြီးတစ်ခုပါ။ တကယ်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်မတို့တော်တော်များများ အဲ့ဒီအချက်ကိုလက်ခံကြပါတယ်။’ ဆိုပြီး သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous BTS အဖှဲ့ရပျနားလိုကျတာကွောငျ့ အကွီးအကယျြ ဆုံးရှုံးနဈနာခဲ့တဲ့ ကမ်ဘာကြျောအဆိုတျောနှဈယောကျ။
Next မကျြမမွငျ ပရိသတျတဈယောကျရဲ့ အမွငျအာရုံကို ကုစားပေးခဲ့တဲ့ မကျဆီ။